Gabdhuhu Maleeyihiin Gar Iyo Shaarib Mise Waa Ragga Oo Kaliya (DAAWO)
Nov 11, 2011 - jawaab	Number of View: 5191Share
Nairobi (S.News Networ) Mararka qaar waxaad la kulmaysaa waxyaabo kaa yaabiyay islamarkaana aaadan rumaysan karin taasi oo ay dhacdaba in ay maskaxdaada ka waynaato, balse markii ay dadku kaaga sheekeeyaan waxaad isleedahay tolow marumbaa mise waa sheeko Somali.
Conchita Wurst waa Gabar 22 jir ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Colombia balsa haatan ku nool kana heesta dalka Austria oo ay dhalasho ka haysato.
Gabadhaan wexeey leedahay Gar iyo Shaarib waxaana aad moodaa markii aad muuqaalkeeda Argto nin dhalinyaro ah ayadoona sidaa ay ah waxaana ku guursaday nin 30 jir ah oo lagu magacaabo Jacques Patriaque.
Conchita Wurst oo la hadlaysay tvga Orf ayaa sheegtay in ay aad ugu faraxsantahay garka iyo shaaribka ku yaalla waxaana ay tiri
” Marka aan Heesaayo intii igu dhibsato Garka iyo Shaarbaha waan ka raali galinayaa oo ha ogaadeen ineey danta igu kaliftay maadaama aan Fanka iyo Heesaha aad u jeclahay ayeey tiri iyada oo ilmeeneeyso Conchita Wurst .
Conchita Wurst ayaa waraysigaasi uu tv-gu ka qaaday ku sii sheegtay in waqti dheer ay lahayd garkaislamarkaana ay awoodi wayday in ay cirib tirto waxaana ay sheegtay in waqtiba waqtiga ka dambeeya uu isa soo tarayay , walse gabadhu waxaa ay sheegtay in shaaribada ay isku aragtay sanado dhaw oo aan sidaa u sii fogayn sida ay hadalka u dhigtay.
Mss.Wurst ayaa tiri
“hadaan xiiri garka iyo shaaribka igu yaallo waa sii badanayaa ma aqaan waxaan sameeyo in badan ayaan lagalay dagaal laakiin waa suura gali wayday in uu dhamaado maxaa yeelay halkii mar ee aan xiiro waxaa uu noqonayaa mid ka badan kii hore ee aan la dagaalamayay marka dantu waxaa ay igu qasbaysaa in aan faraha ka qaado oo uu sidiisaa iigu yaallo”
Conchita Wurst waa gabar dhinaca fanka aad ugu cod macaan waxaana inta badan ay soo jiidatay indhaha dadka daawanaya balse waxaa caqabad ku noqday garka ku yaalla waxaana markii ugu horesay ee ay ka soo muuqato televession-ka layaabay malaayiin qof oo daawanaysay kuwaa ay fajac ku noqotay gabar gar iyo shaarib leh.
HALKAAN KA DAAWO MUUQAALKA GABADHA Max’ed Cibaar Diiriye